Ka Ganacsiga Kala Bixinta iskutallaabta ee Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
Ma ubaahantahay faaiido badan? Ka ganacsiga labada lammaane
Newbie's, oo ka fikiraya sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah , waxay bilaabaan istaraatiijiyado tijaabinta lamaanaha waaweyn ee lacagta ah. Badanaa, ganacsiga ugu horreeya waxaa laga furaa EUR / USD. Haddii macaashku sii socdo in laga ganacsado, laakiin ha iloobin hantida kale ee Forex, sida labalaab iskutallaabta.
Waxaa jira saddex nooc oo xigashooyin ah suuqa Forex:
Xigasho Toos ah . Qadarka lacagta waxaa lagu iibsan karaa hal doolar. Meesha koowaad ee labo "lacagta aasaasiga ah".
Xigasho Dadban . Immisa USD ayaa ku jirta lacagta (Euro, Pound, Yen, iwm) Oo lagu lammaaneeyo kaalinta labaad ama "quote currency".
Xigasho Isdhaaf Saamiga labada lacag ah illaa USD, oo aan lagu darin qiimaha. Lammaanaha iskutallaabta ah si faahfaahsan looguma faahfaahin barashada ganacsiga ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah, in kasta oo ay ka faa'iidaystaan lammaanaha waaweyn
Lammaanayaal lacag badan iyo calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah;
Isbadal sarreysa oo gudaha ah - faa'iido ku saabsan waqtiga M1-M5;
Laba-isweydaarsi faa'iido leh fadhi kasta oo Forex ah;
Xiriir yar oo la leh wararka Mareykanka iyo tirakoobka;
Aynu aragno sida iskutallaabtu ula shaqeeyaan seddex xeeladood oo fudud.
Hantida ganacsiga : Mid kasta oo ka mid ah lacagta iskutallaabta. Shuruudda ugu weyn waa go'an (2-3 dhibic) faafitaan iyo lacag la'aan qarsoon.
EUR / GBP - Brexit wuu dhammaaday, macaashka ayaa hadhay
Qaybta ugu badan ee dareeraha ah ee 'Euro Zone' ayaa iskutallaabaysa. Xitaa inkasta oo Brexit, lacagta Ingiriiska ay ku jirto kaalinta labaad ka dib euro marka la eego mugga ganacsiga. Labada nin waxay faa'iido ka helayaan Yurub oo keliya laakiin sidoo kale fadhiga Aasiya Forex.
Jaantuska 'Heiken Ashi', marka la barbar dhigo "shumacyada" caadiga ah, wuxuu isticmaalaa dheecaan dheeri ah si loo sifeeyo buuqa suuqa, kaasoo aad ugu badan laba-laabka iskutallaabta. Ganacsadaha ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah wuxuu arkaa kaliya isbeddelka wuxuuna u furayaa ikhtiyaarka si sax ah.
Ikhtiyaar (CALL) ikhtiyaar . Ugu yaraan saddex laambadood oo buluug ah.
Fall (PUT) doorasho . Ugu yaraan saddex laambadood oo gaduud ah hoos.
GBP / JPY - xoqid intraday
Waxaa jira isbedel sare dhammaan fadhiyada Forex. Waad furi kartaa xulashooyinka muddada-gaaban muddada 3-5 daqiiqo ah, laakiin waa keliya marka ay jirto xaqiijin ka timaadda software-ka calaamadaha binary.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Qaanso-roobeed . Tilmaamuhu wuxuu ka kooban yahay dhowr celcelis celcelis fudud oo dhaqdhaqaaq leh isla muddadaas iyo isugeyn kala duwan oo la xiriirta qiimaha hadda jira. Fikradda tilmaamuhu waa in jaangooyooyin kaladuwan ay muujinayaan isbeddelka ku dhaca waqtiyada ka sarreeya iyo kuwa hoose ee la xiriira midka hadda jira isla markaana ka dhigaya suurtogalnimada in si sax ah loo furo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah. Farsamo la mid ah ayaa loo adeegsadaa Istimatiijiyada Ichimoku Kinko Hyo iyo bixiyaha calaamadda binary ee ugu fiican.
Tilmaamuhu lama heli karo dhammaan goobaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah. Xaaladeena? barmaamijka ganacsiga ee Deriv ee ganacsiga ayaa loo isticmaalay Binary.com. Haddii dillaalkaagu uusan lahayn tilmaamahan, waxaad ku soo dejisan kartaa bilaash internetka oo waxaad u isticmaali kartaa meel kasta oo ganacsi oo kale (sida MetaTrader) oo ah calaamado lagu furayo ikhtiyaarka koontadaada .
Ikhtiyaar u kac (WAC) . Qiimaha ayaa laga soo bilaabayaa sagxadda kor oo dhan Celceliska Dhaqdhaqaaqa ama wuxuu galayaa "daruurta" tilmaame. Xulashada labaad ayaa kaliya loogu talagalay ganacsatada xirfadleyda ah!
FALL (PUT) option . Xaaladaha iska soo horjeedda - qiimaha ka hooseeya Dhammaan Celceliska Dhaqdhaqaaqa ama kor ilaa hoos wuxuu galayaa "daruurta".
EUR / JPY - isbeddelka "Europe + Asia"
Lammaanaha iskutallaabta ayaa si fiican uga shaqeeya labada kal-fadhi ee Yurub iyo Aasiya. Dhaqdhaqaaqa doolarka waa la iska indhatiri karaa; Labada lamaane ayaa si weyn loo saadaalin karaa bilowga iyo calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah.
Ikhtiyaar (CALL) ikhtiyaar . Parabolic SAR qiimaha ka hooseeya. Stochastic waxay ka sarreysaa heerarka eber ama aagga la iibsaday.
Fall (PUT) doorasho . Xaaladaha iska soo horjeedda: Parabolic SAR ayaa ka sarreeya qiimaha. Stochastic sidoo kale waxay hoos ugu sii socotaa in la iibiyo.
Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Istaraatijiyadaha badankood iyo calaamadaha binary sare kuma shaqeeyaan warka!
Heiken Ashi wuxuu muujinayaa dhamaadka hagaajinta maxalliga ah ama dib u celinta wanaagsan. Markay u dhowdahay dib u bilaabashada isbeddelka, ayaa sii weynaanaya hooska shumaca, xitaa haddii jirku ku sii jiro isla heerka. Waxaa lagugula talinayaa in la xiro macaashka / luminta hadda jirta marka la beddelayo midabka jaantuska.
Aan soo koobno . Lammaanaha iskutallaabtu waa qalab wanaagsan oo dheeri ah oo lacag lagu kasbado Forex. Xirfadlayaashu way ogyihiin tan, bilowguna waa inay qaataan kaliya calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, oo ay go'aannada gaaraan naftaada.